कस्ता महिलामा स्तन क्यान्सरको जोखिम? कुन उमेरमा परीक्षण गर्ने? [भिडियो] :: डा रोशन प्रजापति :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कस्ता महिलामा स्तन क्यान्सरको जोखिम? कुन उमेरमा परीक्षण गर्ने? [भिडियो]
डा रोशन प्रजापति बुधबार, कात्तिक ३, २०७८, ०६:३०:००
अक्टुवर महिनालाई स्तन क्यान्सर सचेतना दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ। यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य स्तन क्यान्सरलाई सुरुवाती अवस्थामै पत्ता लगाउने र उपचार गरेर स्तन क्यान्सरबाट हुने मृत्युदरलाई घटाउने हो। विश्वभरीमै तथ्यांकहरु हेर्दा अहिले स्तन क्यान्सर पहिला नम्बरमा पुगेको छ।
कुल क्यान्सरमध्ये ११ दशमलब ७ प्रतिशत स्तन क्यान्सरले ओगटेको छ। महिलाहरुमा हुने क्यान्सरको अवस्था हेर्दा एकचौथाइ अर्थात २५ प्रतिशत स्तन क्यान्सरले ओगटेको छ।
स्तन क्यान्सर हुनुको प्रमुख कारण एस्ट्रोजेन हर्मोन रिलेटेड पनि छ। जस्तै महिलाहरुमा ११ वर्ष भन्दा कम उमेरमै महिनावारी भएको छ वा ५५ वर्षपछि पनि महिनावारी भइरहेमा पनि स्तन क्यान्सर हुने जोखिम उच्च रहन्छ। यस्तै ३० वर्षसम्म पनि सन्तान नजन्माएका महिला वा शिशुलाई स्तनपान नगराएका महिलाहरुमा पनि स्तन क्यान्सर हुने जोखिम उच्च रहन्छ।
यो बाहेक वंशाण्ुागत कारण अर्थात परिवारमा आमा, दिदी, फुपु वा कसैलाई स्तन क्यान्सर भएको छ भने ती परिवारका अन्य महिलाहरुमा पनि स्तन क्यान्सर हुने जोखिम रहन्छ। १० प्रतिशत व्यक्तिमा स्तन क्यान्सरको कारण वंशागुणत पनि हुनसक्छ। यसमा ब्राकाजिन म्युटेसनका कारणले स्तन क्यान्सर हुने गर्छ।
यदी ४० वर्षभन्दा कम उमेर वा दुवै स्तनमा क्यान्सर भएको छ भने ती महिलामा वंशाणुगत कारणले स्तन क्यान्सर भएको हुनसक्छ। परिवारमा पुरुष सदस्यमा पनि स्तन क्यान्सर छ भने यो वंशाणुगत हुनसक्छ।
स्तन क्यान्सर महिलालाई मात्र नभइ पुरुषलाई पनि हुने गर्छ। १०० जना महिलाहरुमा क्यान्सर देखिएमा एकजना पुरुषमा स्तन क्यान्सर हुनसक्छ। त्यसैले स्तन क्यान्सरको लक्षण समयमै थाहा पाउन सकेमा उपचार गरेर निको हुन सकिन्छ।
यसका लागि लक्षणहरुबारे थाहा पाउन जरुरी छ। यदी स्तनमा गाँठागुँठी वा गिर्खाहरु आएको छ, काखी वा घाँटीमा गाँठागुँठी वा गिर्खाहरु आएको छ, स्तनको छालामा सुन्तलाको बोक्राजस्तो परिवर्तन भएमा स्तन क्यान्सर भएको हुनसक्छ।
यस्तै स्तनपान नगराएका महिलाहरुको निप्पलबाट पिप वा तरल पदार्थ बगेको अवस्थामा पनि स्तन क्यान्सरको आशंकामा परीक्षण गराउनुपर्छ।
परिवारमा वंशाणुगत स्तन क्यान्सरको आशंका छ र जीन परीक्षण गर्दा ब्राकाजीन पोजिटिभ छ भने पनि स्तनक्यान्सर परीक्षण गराउनुपर्छ।
२० वर्ष उमेर पुगेपछि ब्रेष्ट सेल्फ एक्जामिनेसन भनेर आफैले स्तन जाँज गर्न सकिन्छ। यसका लागि कसरी परीक्षण गर्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मीसँग पराशर्म लिन सकिन्छ। यसरी जाँच गर्दा स्तन क्यान्सर भएको शंका लागेमा अल्ट्रासाउण्ड वा एमआरआइ गर्न सकिन्छ।
३० वर्ष उमेर पुगिसकेका महिलाहरुले मेमोग्राम गराएर पनि स्तन क्यान्सर छ वा छैन जाँच गर्न सक्छन्। यस्तै ४० देखि ४५ वर्ष सम्ममा स्तनको एक्सरे गरेर पनि क्यान्सर छ वा छैन जाँच गराउनु पर्छ। जस्तै ४५ वर्षदेखि ५५ वर्ष उमेर समुहका महिलाहरुले वर्षमा एकपटक स्तनक्यान्सर जाँच गराउनुपर्छ।
५५ वर्षपछि भने २ वर्षमा एकपटक क्यान्सर परीक्षण गर्दा हुन्छ।
आफू वा परिवारका कुनै सदस्यलाई स्तन क्यान्सर भएको आशंका छ भने तुरुन्त अस्पतालमा पुगेर परीक्षण गराउनुपर्छ। यदी सुरुकै अवस्थामा स्तन क्यान्सर पत्ता लागेर उपचार गरेर निको पार्न सकिन्छ। यदी कसैलाई स्तन क्यान्सर भइहालेमा सर्जरी, किमोथेरापी वा रेडियोथेरापी गर्ने गरिन्छ। यो रोगको अवस्था वा स्जेट हेरेर गर्न सकिन्छ।
स्तन क्यान्सरको उपचारमा सबैको स्तन काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। सुरुकै अवस्थामा स्तन क्यान्सर भएको छ भने स्तन बचाएर पनि उपचार गर्न सकिन्छ। तर सबैलाई गर्न मिल्छ भन्ने पनि छैन। अवस्था हेरेर हुन्छ। कसैलाई रेडियसन दिन नमिल्ने छ, ट्युमर साइज ठूलो छ वा स्तन सानो छ भने पनि स्तन जोगाएर अप्रेसन गर्न नसकिने अवस्था पनि हुन्छ। नत्र बिरामीको अवस्था स्तन क्यान्सरको अवस्था हेरे पनि स्तन जोगाएर उपचार गर्न सकिन्छ।
अर्को कुरा स्तन क्यान्सर लागिहालेमा निको हुँदैन भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन। यसलाई उपचार गराउनुपर्छ। स्तन क्यान्सरको उपचार धेरै महंगो पनि छैन। किमोथेरापी तथा त्यसपछि अवस्था हेरेर रेडियोथेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले दिने एक लाख सहुलियत र स्वास्थ्य बिमाबाट पनि स्तन क्यान्सरको उपचार पुरा गर्न सकिन्छ।